Soo -saaraha iyo Warshadaha Istaraatiijiyadda Rotary ee Xawaaraha Sare ee ugu Fiican | GOJON
* Gogosha goos gooska ah waxay siisaa xasilooni sare iyo si wax ku ool ah;
* Hore-u-dhigidda dhinaca hore iyo dhinaca gadaal, helista warqadda oo dhan, waxay dammaanad-qaadaysaa habsami-u-socodka raso;
* Warqadda ugu horreysa ee waraaqdu waxay awood u leedahay in lagu dhejiyo jiho gaar ah side dhinaca midabka leh oo kor loo qaado), si otomaatig ah u dhigidda aaladda wax soo saarka waa ikhtiyaar;
* Si otomaatig ah/gacanta ku helaya warqad la dooran karo mode Qaabka gacanta ayaa ku habboon kara sabuuradda xajmiga yar;
* Xakamaynta aragga ， hawl-fududeyn state xaalad shaqo ayaa si otomaatig ah loo soo bandhigi karaa alar digniinta tooska ah ee khaladaadka ama khaladaadka;
* Nidaamka xakamaynta Siemens PLC iyo nidaamka xakamaynta xawaaraha-is-beddelka badan, wuxuu awood u siiyaa xakamaynta xawaaraha aan xad lahayn iyada oo aan la joojin mashiinka.
Qeybinta Kaydinta Tooska ah
* Marka xidhmooyinku ay gaaraan dhererka goobta, saxanka stacker -ka iyo hayaha ku -meelgaarka ah ayaa si otomaatig ah isu beddeli doona iyada oo aan la hawlgelin.
* Xirmooyinku si otomaatig ah ayey uga bixi karaan, iyagoo ku xiraya nidaamka wareejinta dhulka, si dhakhso leh ayey u shaqeeyaan.
* Nidaamka maareynta waxsoosaarka wuxuu ku xiraa nidaamka kontoroolka laminator -ka nidaamka kontoroolka jiingadda oo si fiican u hagaajin kara wax -soo -saarka, kordhin kara wax -soo -saarka, yareyn kara wax -soo -saarka cayriin, yareyn kara ku -tiirsanaanta khibradda hawlwadeenka
* Dhammaan waxyaabaha saameeya wax -ku -oolnimada waxaa lala socdaa oo lagu hagaajiyaa qaybta wax soo saarka PMS, oo ay ku jiraan xakamaynta isbeddelka waraaqaha, isbeddelka dalabka iyo wixii la mid ah.
* Dhammaan qodobbada saameeya tayada badeecadda waxaa lala socdaa oo lagu hagaajiyaa qaybta xakamaynta tayada PMS, oo ay ku jiraan xakamaynta xabagta jiingadda, xakamaynta xagal duubista preheater iyo wixii la mid ah.
* Xakamaynta macluumaadka PMS ayaa mas'uul ka ah maaraynta amarka, xakamaynta alaabta ceeriin iyo tirakoobka warbixinta.
Nidaamka Baarista Fog
* Injineerada iyada oo loo marayo shabakadda iyo kombiyuutarka khadka wax soo saarka si loo dhiso xiriir fog
* Dhibaatooyinka la beegsanayo, waxay si weyn u gaabin karaan waqtiga dhimista sababtuna tahay guuldarada
* Samee dayactirka daruuriga ah ee lagama maarmaanka ah iyo kor u qaadista nidaamka xakamaynta khadka wax soo saarka
Nidaamka Gawaarida iyo Xakamaynta
* Qaybaha ugu waaweyn ee mootada iyo koontaroolka ayaa ka yimid alaab -qeybiyeyaal caan ka ah adduunka tanina waxay hubin kartaa xasilloonida iyo isku halaynta khadka wax -soo -saarka oo dhan
* Bandhigga HMI iyo hawlgalka waxaa lagu dhammayn karaa taabashada shaashadda
* Teknolojiyadda VFD iyo xakamaynta hawlgalka ayaa si aad ah loogu dabaqay khadka wax -soo -saarka jiirka si markaa isticmaalka tamarta uu u yaraado
* Shaashadda hawlgalka oo gooni ah ayaa loo adeegsadaa miiska hawlgalka ugu weyn
Hore: Laminator -ka xawaaraha sare leh
Xiga: Single Facer Laminating Smart Line
Istaraatiijiyada Dukaanka Weelka
Stacker Dib -u -Celinta
Gawaarida Xamuulka qaada, Mashiinka Smart Waayo Xidhmada Waraaqaha, Bangiga Erp, Shaashadda Hawlgalka Aqoon isweydaarsiga, Nidaamka Rullaluudlaha, A3 Faylka Waraaqda,